लोकदर्शन रेग्मी सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 868 पटक पढिएको
नेपालमा नागरिक र सरकारले विश्वास गरेको संस्था भनेको निजामती सेवा हो । त्यही सेवालाई समयसापेक्ष जिम्मेवार र क्रियाशील बनाउन उद्यत छौं हामी । सरकारले दिने जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण भए पनि हामीले विश्वासका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।
सरकारको उपस्थितिलाई विश्वसनीय बनाएर लैजाने सन्दर्भमा होस् वा विपद् व्यवस्थापनका जटिल घडीमा वा सुरक्षा संवेदनशीलता जोखिम रहेको बेला राज्यले विश्वास गरेर दिएका अपत्यारिला काम पनि निजामती सेवाले पूरा गर्दै आइरहेको छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्दै आम नागरिक र समग्र मुलुकको सेवामा समर्पित रहन पाउनु हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले पनि निजामती सेवालाई रूपान्तरणसहित सुधार गरेर लैजानुपर्ने दायित्व छ । यसका लागि प्रशासनमा पुनर्संरचना र रूपान्तरण जरूरी छ । यो सेवालाई प्रभावकारी र सबैको विश्वसनीय बनाउनु हाम्रो कर्तव्य छ । हामीले अहिले माहुरीको रूपमा रहेर कमिला जस्तै लगनशील हुने प्रण गर्नु परेको छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै हामीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । अनि मात्र संघीय शासन प्रणाली सफल हुन सक्छ ।
संविधान र कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा सुशासन कायम गर्ने हो । यो नै प्रशासनको मूल धर्म भएकाले यसलाई अझ सुदृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै संवैधानिक निकाय र अंगका बीचमा समन्वय र आपसी सद्भाव विकास गरेर आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि राज्यका सबै अंगबीच सद्भावपूर्ण र सहकार्यको भावना हुनुपर्छ, अनि मात्र हामीले चाहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुन्छ ।आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासका पक्षमा पनि जोड दिन जरुरी छ ।
बाह्य ज्ञानको आधारमा भन्ने हो भने ‘सिभिल सर्भिस लाइज् एट द हर्ट अफ सिभिलाइजेसन’ ( निजामती सेवा सभ्यताको मुटु हो ) । हामीले दिने सेवा जति राम्रो छ, त्यति नै हामी सभ्य छांै भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । सबै निजामती कर्मचारीको साझा प्रयास मुलुकलाई सभ्य बनाउनका लागि हुनुपर्छ।
हामी नेपालका अन्य जुनसुकै संगठन तथा व्यवसायका मानिसभन्दा अब्बल छौं । हामी लोकसेवाको कठिन परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएर आएका जनशक्ति हौं । त्यसैले हामीले उच्च मनोबल राखेर प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छौं भन्ने जोशजागरका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अब नेपाल र नेपालीको मुहार हसाएर नेपालप्रतिको गुन तिर्न सक्षम हुनैपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व विश्वमै राम्रो मानिएको शासनव्यवस्थाको रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले अब नेतृत्वको सपना र योजना साकार पार्न दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । मुख्य कार्यभारको रूपमा रहेको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । ‘आर्थिक समृद्धि’ नेतृत्वको मात्र होइन ८६ हजार निजामती कर्मचारीको सपना र प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ
यसका लागि दिगो र निरन्तरतासहितको सुधार प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्णरूपमा प्रणालीभित्र ढाल्ने, दिगो कानुनी शासन र सुशासन स्थापनालाई मूल कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न अब ढिला गर्नु हुन्न । समय अघि बढ्दै जान्छ, यसको पहिचान गरेर अघि बढ्न सके हाम्रो मात्र होइन राष्ट्रकै हित हुनेछ ।
कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । त्यसैले पनि हरेक कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूलाई कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । अहिले हरेक कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सेवाप्रवाहप्रति जिम्मेवार बनाउने योजना अघि सारिएको छ । यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । कर्मचारीलाई कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्ने परम्परालाई स्थापित गरिनेछ ।
यसका लागि नविन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सेवाप्रवाह गर्नका लागि संघीय संरचनाअनुसारका संगठन निर्माण गर्ने, त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो र परिणाममुखी बनाई जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले शासन गर्ने र कर्मचारी वर्गले शासनका मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने हो । नेतृत्व र कर्मचारीको यही भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हामी आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा अवश्य पुग्नेछौं । यी दुवै पक्षले जनभावना बुझ्न सकेन भने सफल हुन सकिन्न । त्यसो त दुवै पक्षलाई जनताको चाहनाविपरीत काम गर्ने अधिकार हुन्न, किनकि यी दुवै पक्ष जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
अहिलेको पेचिलो विषय भनेको कर्मचारी समायोजन हो । संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि समायोजन ऐन आइसकेकाले अब सोही ऐनअनुसार नै कर्मचारी समायोजनप्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसमा खासै समस्या आउँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । समायोजन गर्दा कर्मचारीको पनि चित्त बुझ्ने, प्रणाली पनि नबिग्रने गरी स्रोत र साधनको सामथ्र्यमा ध्यान दिन सकियो भने यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।
निजामती क्षेत्रभित्र काम गर्ने जनशक्तिको सन्तुष्टिको तह र निजामती सेवाबाट सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मात्रा पनि बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन पनि अब ढिलाइ हुँदैन । त्यसको तयारी थालिएको छ । यसैगरी कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन तथा पेसागत संगठन अनुशासित हुनुपर्ने र जनतालाई दिने सेवाप्रति उनीहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
—रेग्मी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव हुन् ।
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ कम्युनिस्टहरूको प्रणाली परिवर्तन
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ चुनावदेखि सावधान
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ कम्युनिस्टसँग किन डर ?
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ निर्वाचनमा भयको छायाँ
बुधवार, मंसिर ६, २०७४ अनेक प्रश्नमा कांग्रेस
बुधवार, मंसिर ६, २०७४ गफले होइन, कामले समृद्धि !
बुधवार, मंसिर ६, २०७४ कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद
मंगलवार, मंसिर ५, २०७४ युवा पुस्तालाई तीन सल्लाह
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6582
भ्रष्टाचारका पाँच सय मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किए 1213
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13397
पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार 2357
कांग्रेसले गठबन्धन अझै कस्ने 9246
कम्युनिस्टहरूको प्रणाली परिवर्तन 996
चुनावदेखि सावधान 922
चीनसँगको एउटा मात्र नाका चार दिन बन्द 1222
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 5045
सडकमा भेटिएको बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो 889
निर्वाचन विरोधी एक शिक्षक पक्राउ 1047
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2697
चरिकोटमा भेटिएको बम सेनाद्वारा निष्क्रिय 1256
भाइबर र ह्वाट्स एपमार्फत ठगी बढ्यो 5700
एनालग टीभी बन्द : ३० लाख ग्राहक प्रभावित 32675